चीनपछि कोरिया, इरान, इटाली र अमेरिकामा कोरोना डरलाग्दो गरी फैलियो ! सेयर गरौ « Online Tv Nepal
चीनपछि कोरिया, इरान, इटाली र अमेरिकामा कोरोना डरलाग्दो गरी फैलियो ! सेयर गरौ
Published :3March, 2020 10:03 am
चीनबाट दुई महिनाअघि फैलिएको कोरोना भाइरसले विश्वका आधाभन्दा बढी भू-भाग प्रभावित भइसकेको छ । चीनमा मर्नेको संख्या तीन हजार पुग्दैछ । विश्वभर मर्नेको संख्या तीन हजार नाघेको छ । संक्रमितको संख्या ९० हजार पुगेको तथ्यांक छ ।
दक्षिण कोरिया र अमेरिकामा पनि कोरोना भयावह तरिकाले फैलिइरहेको छ । कोरियामा संक्रमितको संख्या पाँच हजार नजिक पुगेको छ । मर्नेको संख्या २८ पुगिसकेको छ । कोरियामा चीनको भन्दा बढी दैनिक संक्रमित भेटिएका छन् । एकैदिन छ सय संक्रमित भएका छन् ।
अमेरिकामा एक सय संक्रमित भेटिएका छन् । अमेरिकाको वासिङ्टन र क्यालिफोर्निया सबैभन्दा प्रभावित छ । अमेरिकामा छ जनाको ज्यान गइसकेको छ ।
इरानमा सर्वोच्च नेताका सल्लाहकारको कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु भएको छ । ७१ वर्षीय मोहम्मद मिरमोहम्मदीको सोमबार निधन भएको हो । उनी अयोतल्लाह अली खमेनीका सल्लाकार थिए । इरानमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट ६६ जनाको ज्यान गइसकेको छ । १५०१ जनाको मृत्यु भएको छ ।
अविरल वर्षाले पोखरा हेम्जाका ३०० घर डुबानमा
गएरातिदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण पोखरा महानगरपालिका–२५ हेम्जाका ३०० भन्दाबढी घर डुबानमा परेका छन् ।
बालेनले काठमाडौंमा सुरु गरे दिल्लीका केजरीवाल भन्दा राम्रो योजना
काठमाडौँ महानगरले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै जेष्ठ नागरिकहरूलाई घरमै पुगेर स्वास्थ्य
पेट्रोलको २० र डिजेलको २८ रुपैयाँ मूल्य घटाउने
सरकारले घटाएको डिजेल र पेट्रोलको नयाँ मूल्य शनिबार मध्यरातिदेखि लागू हुने बताइएको छ । सरकारले
दाजुलाई रुवाएको आरोप देखि ठगीको आरोपसम्म बोले रभी लामिछाने ( भिडियो सहित )…..
‘रास्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी’ का सभापति रबि लामिछानेले आज रिपोर्टस क्लबमा पहिलो पटक पत्रकार सम्मेलन गरेका
जनतालाई जानकारी गराउने कर्तव्यबाट सञ्चारकर्मीलाई रोक लगाउन नहुने
बेलायतले हङकङ शहर चीनलाई हस्तान्तरण गरेको २५ औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आगामी साता आयोजना हुने बैठकमा